Ny loza ateraky ny omby sy ny foko | Martech Zone
Ny loza ateraky ny omby sy ny foko
Sabotsy, Desambra 31, 2011 Alatsinainy 8 Febroary 2016 Douglas Karr
Misy boky mpivady novakiako izay nisy fiatraikany lehibe tamin'ny fahatsapako ny Internet sy ny marketing amin'ny ankapobeny. Iray amin'ireo boky ireo Mark Earl's Andiany: Ahoana ny fanovana fitondran-tena amin'ny alàlan'ny fampiasana ny tena toetrantsika ary ny iray kosa an'i Godin Foko: Mila anao hitarika anay izahay.
Ny ankamaroan'ny resaka momba ny omby sy ny foko dia tena miabo… ireo mpitarika nifanakalo hevitra (toy ny tamin'ny Lahatsary nataon'i Godin's TED) dia sady manaitra no manome aingam-panahy. Mpino goavambe sy foko aho, nefa somary pessimist ihany amin'ny fihetsiky ny olona raha ny momba ny omby sy foko. Ireo boky ireo sy ilay horonantsary dia miresaka daholo rehefa mahay manamboatra omby aman'ondry ny mpitondra… fa tsy miraharaha ny lafiny maizin'ny omby izy ireo.
Matetika ny politika dia zavatra ialan'ny tsirairay amin'ny bilaogy marketing sy teknolojia, saingy miady hevitra aho fa ny marketing sy ny fampiasana teknolojia mamiratra dia manana ny zava-drehetra atao amin'ny fahafahan'ny kandida mandresy na lany amin'ny fifidianana. Mino aho fa ny marketing sy ny haitao no tena nandresy Fifidianana 2008 ary napetrany ao amin'ny White House ny filoha Obama.
Hiverina any amin'ny omby. Misy olana roa lehibe amin'ny omby:
Mpitondra diso - Indraindray ny olona be karisma, manan-tsaina, tsara tarehy indrindra na lava indrindra ao an-trano dia tsy mety, fa manara-dia azy ireo matetika isika.
Mpanaraka mankatò - Ny fankatoavana indraindray dia entanin'ny tahotra nefa koa entin'ny tsy fahalalana.
Ny nahatonga ny aingam-panahy tao amin'ny bilaogy dia ny toe-draharaha politika misy eto amin'ny firenena ankehitriny. Raiso, ohatra, ny filoha Obama. Ny iray amin'ireo feo maheno antsika ankehitriny ary ny iray izay hanohy hivoatra hatrany amin'ny fifidianana dia ny filazan'ny filoha Obama Kamo ny amerikanina. Ny teny nalaina dia naseho tamin'ny endriny diso saingy averimberina isaky ny varotra, fifanakalozan-kevitra na adihevitra politika. Na dia ampiasaina amin'ny tsy sahaza azy aza izy io, ireo mpitarika amin'ny ankavanana dia mampiasa io teny nindramina io ary ny andiam-bibin'izy ireo dia manohy mitazona ilay hevitra hoe mino tokoa i Obama fa kamo ny olom-pirenentsika. Tsy izany no nolazainy.
Alohan'ny hanombohanao hieritreritra fa hisafidy ny ankavanana aho, dia ampiako fa ny politika avy amin'ny ankavia dia ratsy toetra. Satria vitsy an'isa ny filoha Obama, maro amin'ireo ankavanana no nantsoina hoe mpanavakavaka noho ny tsy fanekeny fotsiny ny politikany. Fiampangana henjana ho anao ny miaro azy satria midika izany fa tsy afaka tsy hitovy hevitra amin'ny filoham-pirenena ianao - na inona na inona. Mampalahelo izany ary mbola atosiky ny olona lavitra ankavia. Tena mila mijanona izany satria tsy mamokatra ary ny fiantsoantsoana fanavakavaham-bolon-koditra dia tsy misy manampy ny firenena. Fa io dia mahomby amin'ny fampisarahana ny omby!
Ireo Repoblikana dia manohy manohitra ny hetra fanampiny sy ny fametrahana programa sy fandaniana vaovao eto amin'ity firenena ity satria ny fahitan'izy ireo dia tsy zakanay tsotra izao. Ny korontana any Gresy sy any amin'ny firenena hafa ampitan-dranomasina izay natomboka noho ny fahatapahan'ny fandaharan'asan'ny governemanta dia tokony ahin'ny rehetra. Fa ny adihevitra avy any ankavia kosa dia miverina foana hoe: “tsy miraharaha olona ve ianao sa tsia?” Raha te hanapaka programa ianao dia tsy miraharaha olona. Fa rehefa lany ny volantsika, iza no manampy amin'izany? Mazava ho azy fa ny resaka dia mihetsika hahazoana fidiram-bola bebe kokoa (aka: fizarana ara-drariny). Mizara roa ny omby.
Tena manandrana mitazona ny zavatra inoanako manokana tsy ho eo amin'ny toerany aho, ary miresaka fotsiny amin'ny fomba fanodikodinanan'ny antoko politika antsika sy ny fampiasany ny omby. Ratsy kokoa noho ny mandainga - na diso tsotra izao - dia ny fomba fanafihana ny omby any ivelan'io. Manome toky aho fa hahazo hevitra vitsivitsy ratsy momba ity lahatsoratra ity amin'ny lafiny iray na amin'ny lafiny hafa. Rehefa manafika ny omby dia maharary tokoa ary ny hery lehibe na ny tahotra ny fanafihana dia mety hamindra ny omby amin'ny làlan-diso. Ny ankamaroan'ny olona dia misoroka ny omby amin'ny tsy fitenenana na inona na inona mihitsy. Heveriko fa tsy mety izany. Azontsika atao ny manondro saika ny habibiana rehetra amin'ny tantara - na dia ady na raharaham-barotra aza, ary matetika dia tonga amin'ny mpitarika atokisana izay diso ary andiany nanaraka an-jambany noho ny tahotra na ny tsy fahalalana. Ny omby dia nitarika ny Ady Lehibe sy ny fihintsanan'ny toekarena.
Raha tena te-hahita ohatra politika hafa amin'ity ianao tato anatin'ny herinandro dia tsy hijery afa-tsy i Ron Paul sy ny fitsaboana azy avy amin'ny haino aman-jery sy ny elatra havanana. Raha mandresy an'i Iowa i Paul dia henoko tamin'ny foibem-baovao roa fa “mametraka ny maha-ara-dalàna ny caucus Iowa". Heveriko fa midika izany fa tsy anisan'ny andian'omby antsointsika hoe "Etazonia" intsony i Iowa.
Wow… marina? Ka raha tsy manaiky ny maro an'isa amin'ny mpifidy ny ankamaroan'ny mpitondra politika, tsy ny fahitan'izy ireo ny olana… dia moana ny vahoaka ka tsy mandray fanapahan-kevitra tsara? Ron Paul dia nanohy nasiana marika tsy ara-drariny tamin'ny sosona maro… na dia maro aza ny porofo manohana ny heviny sy ny firaketana ny fifidianana. Saingy tsy tian'i Ron Paul ny omby. Avy any ivelany izy ary ny mpitarika ny omby dia manao izay rehetra azo atao mba handevenana azy haingana araka izay tratra.
Ohatra iray hafa tamin'ity fifidianana ity ny fandatsaham-bato izay hitako taiza ihany 6% -n'ny mpifidy mpandala ny nentin-drazana no nilaza fa hisy fiantraikany amin'ny safidiny i Donald Trump. Nijery tobim-baovao roa samy hafa aho ary samy nandroaka an'i Trump mifototra amin'ny valim-pifidianana. Fa raha mijanona ianao ary mieritreritra an'io, 6% dia fitaomana lehibe. Filoham-pirenena maro no nandresy ary resy kely noho izany! Na izany aza, tsy tian'ny omby ny fanonganan'i Trump ny zavatra… noho izany ny fanodikodinana ny valim-pifidianana dia safidy mety kokoa.
Rehefa miresaka politika amin'ny olon-kafa aho (aka ny omby) dia maheno matetika aho hoe: “Tena mpandaha-teny tokoa izy!” na “Izy dia lavaka ** **!” rehefa miresaka ny Filoham-pirenena ankehitriny sy ny mpilatsaka hofidina Repoblikana aho. Raha vantany vao maheno teny toy izany aho dia lasa moana satria tsy mampiseho fahitana ny tena olana… handeha tsara kokoa ve ny firenentsika sa tsia eo ambany fitarihan'io olona io Azoko atao ny tsy miraharaha ny mahomby kokoa amin'ny mpandahateny misy azy ireo ary angamba manantena lavaka ** iray ho avy aza aho. Indraindray ny ** lavaka dia mahavita asa bebe kokoa.
Ohatra farany: Nitsidika sy niresaka momba ny an'ny ray aman-dreniko ny ray aman-dreniko fiahiana sosialy. Niasa mafy tamin'ny fiainany manontolo izy ireo - indraindray ny ray aman-dreniko dia niasa asa maro. Ny raiko koa dia nisotro ronono tao amin'ny Navy Reservation. Samy misotro ronono izy ireo ary manangona filaminana ara-tsosialy. Notsiahiviko azy ireo ny antony ananantsika fiambenana ara-tsosialy sy ny fomba fiasan'ny rafitra tamin'izany… miaraka amin'ny antonony ny androm-piainana ary iza no mila an'io rafitra io. Ny ray aman-dreniko dia samy mpandala ny nentin-drazana ary marin-toetra… nahatsapa izy ireo fa tafiditra tao anaty rafitra ary mitondra ny lohateny hoe hahazo ny karamany. Izany dia mamintina tsara ny fahatsapan'ny andian'omby sy ny fihetsiky ny omby amin'ny resaka fanakanana ny fiarovana ara-tsosialy - na inona na inona fihetsika ilaina mba hiantohana ny fahaverezan'ny rafitra.
Te hieritreritra ianao fa hiseho ny mpitondra diso ary hanjaka ny fahendren'ny omby. Tena tsy mino aho fa hitranga izany. Ny fahitalavitra tena izy no manjaka amin'ny làlambe, betsaka ny olona mifidy ny American Idol noho ny tamin'ny fifidianana, ary ny omby dia manohy mifidy ho an'ny tombotsoany manokana vetivety fa tsy izay mahasoa ny andiany. Nandritra ny asako tamin'ny naha-marketer ahy dia niasa tamina orinasa malaso izay nanjaka sy orinasa mahafinaritra nitolona aho.
Mampalahelo (na tsara vintana ho an'ny sasany) ny zava-misy matetika tsy manelingelina hevitra. Ary rehefa maharitra any amin'ny andian'omby ilay hevitra dia vao mainka mahery vaika kokoa. Ny fampiasana izany fahefana izany dia ampahany amin'ny asako amin'ny maha-marketer ahy. Matetika izahay dia mieritreritra ny fihetsiky ny omby ankehitriny ary mamorona paikady izay manararaotra ny toetran'ny mpamantatra mialoha ny tombotsoan'ny mpanjifanay, izany no mahatonga ahy ho isan'ny olana.
Tags: Fifidianana 2011fifidiananaombyObamaron paulfirenena
Faminaniana momba ny atiny 2012 avy amin'ny Pros